လိုက်ဖက်ညီတဲ့ သတို့သား သတို့သမီးအရံအဖြစ် တူယှဉ်တွဲလျောက်ခဲ့ကြတဲ့ ထွန်းထွန်း စိုးပြည့်သဇင်၊ ဇေရဲထက်နဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
May 12, 2019 Thuta Star 0
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့က ချစ်သူမြိုင်မှာကျင်းပတဲ့ ကရင်ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲလေးမှာ နိုင်ငံကျော်တွေဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီထွန်းထွန်း အကယ်ဒမီစိုးပြည့်သဇင်တို့အပြင် ဇေရဲထက်နဲ့ စံရတီမိုးမြင့်တို့နှစ်ယောက် အတူတူ သတို့သား သတို့သမီးအရံတွေအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်နူးစရာ မင်္ဂလာပွဲလေးမှာ ဆင်တူဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်လွန်းနေကြပါတယ်။ ကြည်နူးစရာပွဲပုံရိပ်လေးကို ” စောချစ်ချစ် နှင့် နန်းကြူကြူလတ် တို့၏ ကရင်ရိုးရာ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ […]
တစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်း
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေတယ် ဆိုရင်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ များနေတယ်ဆိုရင် အိပ်ပျော်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ အိပ်ပျော်ဖို့ ဆိုရင် စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ တစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်းကို 4-7-8 နည်းလမ်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ လေကို4စက္ကန့်ကြာအောင် ရှူသွင်းပါ။ 2.7 စက္ကန့်ကြာအောင် အသက်အောင့် […]
မန္တလေးမှာ ( ၆ ) ရက်အတွင်း ဓားကိုင်ရမ်းကာသူ ( ၁၀၀ ) ကျော် ဖမ်းမိ
မန္တလေးမှာ တုတ်၊ ဓား လက်နက်ကိုင်ရမ်းကားသူတွေကို အသွင်ယူစုံစမ်းဖမ်းဆီးနေပြီး ၆ ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ မန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာ မေလ ၅ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်နေ့အထိ မှုခင်းကျဆင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ အမှုပေါင်း ၈၀၊ တရားခံ ၁၀၇ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ […]
“အမေဆိုတာ သားသမီးအတွက် သေခါနီးအချိန်ထိ စိုးရိမ်ပူပန်နေတတ်ပါတယ်”
လူရွယ်တစ်ယောက်ဟာ သူ့အဖေဆုံးသွားတော့ သူ့အမေအိုကို အိမ်မှာ မထားချင်တာနဲ့ လူအိုရုံကို ပိုထားလိုက်တယ်။ တစ်လမှာ တစ်ခါလောက်တော့ အမေကို သွားကြည့်တယ်။တစ်ရက်မှာ လူအိုရုံကနေ သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူ့အမေဟာ အပျင်းဖျားပြီး သေမလို ဖြစ်နေတယ်။ ချက်ချင်းလာပါတဲ့။သူလည်း သူ့အလုပ်ကို ရပ်လိုက်ပြီး လူအိုရုံကို တက်စီကားငှားပြီး သွားလိုက်တယ်။ သူရောက်သွားတော့ […]
မင်းမိန်းမကို ငါနဲ့ တစ်ညလောက် ပေးအိပ်ပါဆိုပြီး မိန်းမ လာငှါးသူ ရိုက်သတ်ခံရ
လင်မယားနှစ်ဦးအိပ်နေစဉ် လူတစ်ဦးမှ မင်းမိန်းမနဲ့တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ လာပြောသဖြင့် တုတ်နဲ့ ရိုက်သတ် ၁.၅.၂၀၁၉.ရက်နေ့ည၉နာရီအချိန်လင်မယားနှစ်ဦးအိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြောင်း။ည၁၂နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်လူတစ်ဦးအိမ်ပေါ်ရောက်လာကာ’မင်းမိန်းမနဲ့တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ။ဘဲတစ်အုပ်ပေးမယ်။ တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ’ပြောဆိုနေသဖြင့်အပြောခံရသူအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းတော်စပ်သူက၎င်းပြောဆိုသူအထွက်အနောက်မှအရှည်(၇)ပေ။လုံးပါတ်(၈)လက္မခန့်ရှိကျွန်းသစ်သားတုတ်နှင့်ရိုက်သတ်ကာ စီမံကိန်းမြောင်းထဲတွင်ခြေထောက်နှင့်ပုဆိုးချိတ်ကာထားပြစ်ခဲ့သောလူသတ်မှုဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ ကျုံပျော်မြို့နယ်ရုံးဒေါင့်နယ်မြေစခန်းပိုင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။AKOမူပိုင် Unicode ၁.၅.၂၀၁၉.ရကျနညေ့၉နာရီအခြိနျလငျမယားနှဈဦးအိပျယာဝငျခဲ့ကွောငျး။ည၁၂နာရီ၄၅မိနဈအခြိနျလူတဈဦးအိမျပျေါရောကျလာကာ’မငျးမိနျးမနဲ့တဈညလောကျပေးအိပျပါ။ဘဲတဈအုပျပေးမယျ။ တဈညလောကျပေးအိပျပါ’ပွောဆိုနသေဖွငျ့အပွောခံရသူအမြိုးသမီး၏ခငျပှနျးတျောစပျသူက၎င်းငျးပွောဆိုသူအထှကျအနောကျမှအရှညျ(၇)ပေ။လုံးပါတျ(၈)လက်မခနျ့ရှိကြှနျးသဈသားတုတျနှငျ့ရိုကျသတျကာ စီမံကိနျးမွောငျးထဲတှငျခွထေောကျနှငျ့ပုဆိုးခြိတျကာထားပွဈခဲ့သောလူသတျမှုဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး။ ကြုံပြျောမွို့နယျရုံးဒေါငျ့နယျမွစေခနျးပိုငျတှငျဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးနှငျ့ပွဈမှုကြူးလှနျသူကိုဖမျးဆီးစဈဆေးနပွေီဖွဈကွောငျးသိရှိရသညျ။AKOမူပိုငျ
ခဏခဏရန်ဖြစ်နေရင် တကယ်ချစ်တဲ့ စုံတွဲတွေဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိ
မကြာသေးခင်က လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ၄၄% သော လက်ထပ်ပြီးသား စုံတွဲတွေဟာ တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်လောက်တော့ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ပဲ ခဏခဏရန်ဖြစ်တဲ့စုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တကယ်ချစ်တဲ့ စုံတွဲတွေဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ (၁) ရင့်ကျက်တဲ့အချစ်ရေးဖြစ်တယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတာက အချစ်ရေးတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ […]
မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာကျနော်နေပါတယ်…. မသွားနဲ့မလာနဲ့လို့တော့ကျနော်မပြောလိုပါဘူး…ဒါပေမဲ့အရေးတကြီးသွားရမယ်ဆိုတော့သတိလေးနဲ့သွားလာကျပါ…ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သက်သက်ကြီးတော့မသွားကျပါနဲ့လို့ကျနော်အသိလေးပေးပါရစေချစ်သောမိတ်ဆွေ… ၁၀.၅.၂၀၁၉ည၇နာရီ၄၉မိနစ်အချိန်တွင်၇၈လမ်းကနေ၃၈လမ်းစကွေ့ခါစရှိသေးအနောက်ကနေဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့လူ၆ယောက်ကကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်ကိုလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးပစ်ကျပါတယ ကျနော်တို့ညီကိုသူတို့နဲ့ရန်ညှိးရန်စလဲမရှိပါဘူးဗျာ ..အဲ့နေ့ကကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့အပြင်ထွက်မိတာပါ…ဘာရန်ညှိးရန်စမှမရှိပါဘူး….သက်သက်မဲ့ကိုလိုက်ပြီးလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ…ပထမတစ်ချက်ပစ်တော့သတိမထားမိဘူးသြော်ကားကဂဲနင်းမိလိုချော်မှန်တာပဲနေမှာပါဆိုထားလိုက်တယ်… နောက်တစ်ချက်ခါးကိုမှန်တယ်..ဒါသွေးရိုးသားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ချိန်မျက်နှာကိုMaskအုပ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့လူ၆ယောက်အဖွဲ့ကကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်မောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်ကနေကျနော်တို့ကိုလေးဂွတွေနဲ့ပစ်နေတော့တာပဲ ဒါနဲ့ကျနော်ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်းတောင်းပန်တာပေါ့အကိုတို့ဘာလိုချင်လို့လဲဆိုင်ကယ်လိုချင်လို့လားဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံတို့လိုချင်လို့လားမေးတော့သူတို့ကမင်းစောက်ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားဆိုပြီးလေးဂွနဲ့ပါးစပ်ကိုပစ်လိုက်ပါတယ်…ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကွဲပြီးသွားတွေလဲကျွတ်ထွက်သွားပါတယ်.. အဲ့နာနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးသံလမ်းကျော်အောင်မောင်းပြီးလမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကူညီတောင်းပါတယ်..ကျနော်တို့လေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်နေလို့ကူညီပါဦးလို့ပြောတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကကျနော်တို့ကိုမျက်နှာလွဲဂဲပစ်မသိဟန်ပြုပြီးရှောင်တိန်းထွက်ခွားသွားကျပါတယ် အဲ့အချိန်သူတို့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးလေးဂွတွေနဲ့ပစ်ကျပါတယ်ကျနော့်ညီကတော့နောက်ကျောတပြင်လုံးသူတို့ပစ်တဲ့ဖန်ပေသီးအရာစက်ဘီးဂုန်းတွေမူလီတွေအစရှိတာတွေနဲ့ပစ်ခက်ချင်းကိုလဲခံရပါတယ်…… မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးကျနော်တို့ဆိုင်ကယ်စက်နှိုးပြီးကျနော်တို့နေတဲ့ဘက်ကိုဇွတ်အတင်းမောင်းနှင်လာခဲ့တယ်…တစ်လမ်းလုံးကယ်တော်မှုကျပါဦးကျနော်တို့ကိုလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်နေကျပါတယ်လို့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသော်ညားလဲများပြာလှတဲ့လူတွေကတုပ်တုပ်မျှမလှပ်ပဲသူတို့လမ်းသူတို့သွားပြီးရှောင်ကွင်းသွားကျပါတယ် ကူညီမဲ့သူမဲ့နေတဲ့ကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်မဖြစ်ဖူးသူတို့လက်ထဲတော့အသေမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျနော်တို့နေတဲ့စိန်ပန်း၄၁လမ်းလမ်းကြီးပေါ်ရအောင်မောင်းခဲ့ပါတယ်….ကျနော်တို့ကိုဘယ်မှပြေးမရအောင်ဆိုင်ကယ်၂စီးညှပ်ပြီးလိုက်ပစ်ပါတယ်..ဘယ်မှလဲဝင်မရဘူးဘ်ာသူ့မှလဲအကူညီမတောင်းလိုက်ရတော့ဘူး. နောက်ဆုံးဘီယာဆိုင်ထဲကိုထိုးဝင်လိုက်တယ်…ကျနော့်ညီဆင်းပြေးဘီယာဆိုထဲဝင်အကူညီတောင်းတယ်…တသ်ယောက်မှမကူညီသောက်မြဲတိုင်းသောက်နေကျတယ်…အဲ့အချိန်မှာဆိုငကြယ်ရပ်ပြီးကျနော်ဆင်းပြေးမယ်အလုပ်သူတို့လမ်းပစ်လိုက်တယ်..ကျနော့်မေးရိုးကိုထိမှန်သွားတယ်… အဲ့ဒီမှာကျနော်မျက်လုံးတွေပြာထွက်သွားပြီးမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး…ဆိုင်ကယ်ပေါ်ခွရပ်ကြီးနဲ့နောက်တစ်ချက်ဆက်ပစ်လိုက်တယ်ကျနော်နားအုံပွင့်သွားတယ်ကျနော်လဲဆိုင်ကယ်နဲ့ထပ်ရပ်ကြီးလဲနေတဲ့အချိန်ဆက်ပစ်ပါတယ်ကျနော့်ညီလဲအကူမရတဲ့အဆုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဂဲတွေကောက်ပြီးကျနော့်ကိုပစ်နေတဲ့လူတွေကကိုလှမ်းပစ်နေတယ်.. အဲ့အချိန်မှဘီယာဆိုင်ထဲကလူတွေဝိုင်းအုံပြီးထွက်လာကျတယ်…ဒါမှကျနော်လဲသူတို့ရဲ့အသက်ဘေးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်..သွေးတွေစီးအိုင်ကျနေတဲ့ကျနော့်ကိုကောက်ထူးရင်းဘေးမှာရှိတဲ့ ၂၄နာရီဆေးခန်းကိုကျနော့်ညီကဆွဲခေါ်သွားတယ်. ဆေးခန်းထဲအရောက်မှာသေမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ကျနော်ကိုဆေးခန်းထဲကဆရာမကရောက်ရောက်ချင်းစောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပဲရှင့်ကိုကျမဆေးကုမပေးမနိုင်ဘူးတဲ့ရှင့်ဆေးရုံကြီးသွားမှရမယ်တဲ့ဒါဆိုလဲဆရာမယ်သွေးတိတ်အောင်တော့လုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပြီးပြောတော့ဂွမ်းလေးနဲ့ဖိပေးလိုက်တယ်တဲ့ အဲ့တာတောင်သူ့ရဲ့အကူသူနာပြုကလုပ်ပေးလိုက်တာသူကတော့ဖုန်းပွတ်နေလေရဲ့ကျနော်သူတို့ကိုပစ်တင်ဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘာလို့အကျင်နာတရားခေါင်းပါးနေကျတာလဲဘာလို့မကူညီချင်တာလဲဆိုပြီးအတွေးတွေဝင်ရောက်လာတယ်..တစ်လမ်းလုံးကလူတွေကလဲမကြားတာလား?မမြင်တာလားဆိုပြီးတွေးမိတယ်..သွေးလွန်ပြီးမျက်လုံးတွေပြာလာတဲ့နောက်ဆုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးမန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုအရောက်သွားရတော့တယ်… ရောက်တော့လူနာစာရင်းတင်မေးတာဖြေနေရတယ်ဆေးမထည့်ပေးသေးဘူးချုပ်လဲမပေးသေးဘူး…သူတို့မေးသမျှကိုအရင်ဖြေပေးနေရတယ်…ကျနော်နားလည်ပေးပါတယ်အဲ့တာတွေကိုနောက်ဆုံးချုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့အပ်ကိုနှမျောလို့တဲ့ကျနော်အမေကိုအပ်သွားဝယ်ခိုင်းတယ်…ဝယ်ပြီးပြန်လာတော့လဲသူ့အပ်နဲ့ပဲချုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီးချုပ်ပေးတယ်..သေရမယ်နာတွေဆိုသေနေလောက်ပြီ သူတို့လုပ်နေတာနဲ့တင်ချုပ်လဲပြီးရောမှု့ ခင်းရဲရောက်လာပါလေရောကျနော့်ကိုနာမေးတယ်အသက်မေးတယ်ဘယ်မှာနေတာလဲမေးပြီးရောဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒဏ်ရာရတာလဲတဲ့မေးတယ်…၇၈လမ်း၃၈လမ်းထောင့်လို့လဲပြောရောဘာမှဆက်မမေးတော့ဘူး… သူ့နေရာသူပြန်ထိုင်နေတယ်သူ့တာဝန်မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့စတိုင်ကြီးနဲ့လစ်သွားတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကျတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာထိလိုက်မေးတယ်….ကျနော်လဲဓာတ်မှန်သွားရိုက်မယ်အလုပ်ဘေးကပြောသံလေးကြားလိုက်တယ်….မနေ့ကလဲအဲ့လိုပဲလေးဂွနဲ့လိုက်ပစ်ခံရလို့အမှတ်( ၉ )ရဲစခန်းကိုသွားတိုင်တာတဲ့လေးဂွနဲ့ပစ်တဲ့အမှုတွေများ နေပြီတဲ့ကျနော်တို့ဘယ်လိုက်ဖမ်းရမှာလဲတဲ့…? ကျနော်ပြောချင်တာကရဲဆိုတဲ့အမျိုးကဘယ်နေရာမှာလူမိုက်ရှိတယ်…?ဘယ်နေရာမှာသူခိုးဂျပိုးရှိတယ်…?ဘယ်နေရာမှာမူးယစ်သူရှိတယ်ဆိုတာသူတို့အပိုင်သိပြီးသားပါဗျာ…အခုဟာကတာဝန်မဲ့တဲ့စကားကြီးပြောထွက်ရက်တယ်…သူတို့ဖမ်းချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါဒီလိုကြီးတာဝန်မဲ့စကားတော့ပြောမထွက်ရက်သင့်ဘူး…?ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့သေချာစုံစမ်းပေးပါ့မယ်အမှုအမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်အမြန်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်အားရအောင်တော့ပြောပေးသင့်ပါတယ်….. […]
အသွားတုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ ဂိတ်ကြေးကို အပြန်ကျမှ ပိုက်ဆံစုတ်နေတယ်ဆိုပြီး လဲခိုင်းရာ မလဲပေးလို့ ကားကိုပိတ်ထားပြီး အုတ်ခဲနဲ့ ထုဖို့လုပ်တဲ့ စာရေးမ
အစက ဒီ video မရိုက်ဘူးနေခဲ့တာ ကားကို ဒီထဲမှာပါတဲ့ အကျီင်္အမဲနဲ့ အမက အုတ်ခဲနဲ့ ထုမယ်လုပ်တယ် အ့ဒါကြောင့် ဒီ video လေးရိုက်ခဲ့တာပါ ကျတော်တို့ကားက မနက် ၁၀:၃၀ ဝန်းကျင်က ချောက် ဆိပ်ဖြူ အနော်ရထာတံတား ဂိတ်ကိုဖြတ်တယ် တံတားကြေး ၁၆၅၀၀ ပေးတယ် […]
ဒီကနေ့ သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်
ဒီကနေ့ သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ကို ဒီဇင်ဘာ(၁၂) ရက်နေ့ ခရိုင်တရားရုံးကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု ပုဒ်မ ၁၉(က)နဲ့ ထောင်ဒဏ်(၁၂)နှစ် ချမှတ်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေသိပြီး ဖြစ်မှာပါ ။ နိုဝင်ဘာ(၂၆) ရက်နေ့ကလည်း ပုဇွန်တောင် တရားရုံးကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅/၁၆(ဂ)ဖြင့် […]
အပူချိန်ဆက်လက် မြင့်တက်နေပြီး ၄ ရက်အတွင်း အပူချိန် ပြန်ကျမည်ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်ခန့်မှန်း
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အပူချိန်ဆက်လက် မြင့်တက်နေပြီး မြို့သုံးမြို့၌ ထပ်မံ၍ အပူချိန်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့သည်။ လတ်တလော အပူဆုံးဒေသဖြစ်သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်ရှိ မြို့လေးမြို့တွင် မေလ၉ ရက်က အပူချိန်စံချိန်သစ်တင် ပြီးနောက် မေလ ၁၀ ရက်၌ နောက်ထပ်မြို့သုံးမြို့တွင် စံချိန် သစ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မေလ ၁၀ […]